Uyilo lweWebhusayithi iBellevue Washington
Uphicotho lweWebhusayithi yasimahla +1 425-351-1517inkxaso@isenselogic.com
AMAXABISO OOSHISHINO ESEO
Uyilo lwewebhu ye-SEO
IBELLEVUE ISHISHINI ENCINANE SEO
UKUFUMANEKA KWE-SQL SERVER MS
Intsangu, iHemp kunye ne-CBD SEO BLOG
Amaxabiso oShishino lwe-SEO
Isenselogic.com yakha njani iwebhusayithi yakho
Ukwakha iwebhusayithi yakho yeshishini kufuneka iqale ukusuka emhlabeni ukuya phezulu ngawaphi amagama aphambili abantu abawasebenzisayo ukufumana iinkonzo zakho. Ukuba iwebhusayithi yakho ayilungiselelwanga kwiinjini zokukhangela abathengi abatsha abaya kukhuphiswano lwakho.
Inyathelo loku-1: UkuFumanisa ukuHlaziywa kweShishini
Hlalutya eyakho Website. Sijonga iiseti zeemeta / amagama aphambili, okubonakalayo kunye nekhowudi ukubona ukuba iwebhusayithi yakho ibekwe njani kakuhle kwiinjini eziphambili zokukhangela. Umzekelo, umxholo wakho ulungelelaniswe kakuhle njani namagama aphambili abakhangeliweyo?
Hlaziya abo ukhuphisana nabo. Sivavanya iiwebhusayithi zabakhuphisana nabo abakwizikhundla eziphezulu kwizikhundla ezi-5 ukumisela esona sicwangciso silungileyo sokubekwa kweinjini yokukhangela.
Ukujolisa kumagama aphambili asebenzayo. Siphuhlisa uluhlu lwamagama aphambili ekujoliswe kuwo ngokusekwe kwinto efunwa ngabathengi. Yintoni ongayichwetheza kwiinjini yokukhangela ukufumana ishishini lakho okanye iphepha lewebhu? Emva koko sithatha elo gama liphambili kwaye sisebenzisa isitshixo segama elisisiseko kuGoogle esinokuthi silifumane amagama aphambili afihliweyo usenokungacingi. Sikwasebenzisa umcwangcisi wamagama aphambili ukufumana inani elithe ngqo labathengi abafuna amagama athile aphambili kwaye sijolise kwabo kunyusa ingeniso yeshishini.
Inyathelo 2: uPhuhliso lwamagama aphambili noPhando
Uhlalutyo lwamagama aphambili: Uluhlu lwethu lwamagama aphambili, sichonga uluhlu lwamagama aphambili kunye namabinzana. Uphengululo lwamagama aphuma kolunye ushishino kunye nemithombo yolwazi. Sebenzisa uluhlu lokuqala lwamagama aphambili kunye nokujonga inani lemibuzo yeinjini yokukhangela. Emva koko sijolise kumagama aphambili ngobuninzi, ii-singulars kunye namabinzana.
Iinjongo kunye neenjongo. Sichaza ngokucacileyo iinjongo zakho kwangaphambili ukuze sikwazi ukulinganisa imbuyekezo yakho kutyalo-mali kuyo nayiphi na inkqubo yentengiso oyiqalileyo. Umzekelo, usukelo lwakho kunokuba kukunyuka kwama-30 epesenti kwezorhwebo. Okanye unokufuna ukuphucula inqanaba lokuguqula ngoku iipesenti ezi-2 ukuya kwiipesenti ezi-6.
INYATHELO 3: UKUNGENISWA KOMXHOLO NOKWENZA IXESHA
Yenza izihloko zamaphepha. Amagama asekwe kwigama elingundoqo anceda ukuseka umxholo wephepha lakho kunye nokuhamba kwamagama aphambili. Yenza iimeta tag. Iinkcazo zethegi zemeta kunye noncedo lokuchaphazela ukucofa kodwa azisetyenziselwa ngokuthe ngqo inqanaba. Beka izigaba zokukhangela ngobuchule kumaphepha. Hlanganisa amagama akhethiweyo kwikhowudi yakho yomthombo wewebhusayithi kunye nomxholo okhoyo kumaphepha akhethiweyo. Siqinisekisa ukuba sisebenzisa izikhokelo ezicetyiswayo kwigama elinye ukuya kwamathathu amagama aphambili kwiphepha elinomxholo kwaye songeza amanye amaphepha ukugcwalisa uluhlu. Siqinisekisa ukuba amagama aphambili asetyenziswayo asetyenziswa njengokokubandakanya kwendalo kwamagama aphambili. Inceda iinjini zokukhangela ngokukhawuleza ukumisela ukuba liphi iphepha. Indlela yendalo isebenza ngcono. Uninzi lovavanyo lubonisa ukuba amaphepha anamagama angama-800 ukuya kuma-2000 anokugqwesa amafutshane. Ekugqibeleni, abasebenzisi, indawo yentengiso, amakhonkco omxholo aya kugqiba ukuthandwa kunye nenqanaba lokuma.
Inyathelo 4: Qinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho ifanelekileyo
NgokukaGoogle uphando oluninzi lwenziwa kwizixhobo eziphathwayo kunakwizixhobo zedesktop. Ukuphendula uGoogle utshintshe i-algorithms yokukhangela ukuthanda iisayithi ezinobuhlobo. Ukuba iwebhusayithi yakho yangoku ayihambelani neselfowuni uphulukana nabathengi.
Inyathelo 5: Uvavanyo oluqhubekayo kunye nokulinganisa
Vavanya kwaye ulinganise: Hlaziya ubungakanani beenjini yokukhangela kunye nokugcwala kwewebhu ukumisela ukusebenza kweenkqubo oziqalisileyo, kubandakanya uvavanyo lwentsebenzo yamagama aphambili. Vavanya iziphumo zotshintsho, kwaye ugcine utshintsho olulandelelwe kwispredishithi se-Excel, okanye nantoni na oyonwabe ngayo.
Ulondolozo. Ukongezwa okuqhubekayo kunye nokuguqulwa kwamagama aphambili kunye nomxholo wewebhusayithi ziyimfuneko ukuze kuphuculwe umgangatho wenjini yokukhangela ukuze ukukhula kungagxothi okanye kuyeke ukungahoywa. Ufuna kwakhona ukuphonononga isicwangciso sakho sekhonkco kwaye uqinisekise ukuba izixhumanisi zakho ezingenayo neziphumayo zifanelekileyo kwishishini lakho. Ibhlog inokubonelela ngolwakhiwo oluyimfuneko kunye nokulula kokudityaniswa komxholo oyifunayo. Eyakho nkampani inokukunceda ngokuseta / ukufakwa kwebhlog.
Amalungelo obunini @ Isenselogic.